Bemasoandro Itaosy : lehilahy hita faty tao anaty tsinkafona | NewsMada
Bemasoandro Itaosy : lehilahy hita faty tao anaty tsinkafona
Fatin-dehilahy iray no hita tao anaty tsinkafona teny Bemasoandro Itaosy, omaly maraina.
Olona teny amin’ny manodidina ihany no nahita ny fatiny tao anaty tsinkafona. Nahitana ratra sy mangana ny lohany ary mbola teny aminy avokoa ny fitafiany. Araka ny fanazavan’ireo olona teny an-toerana, mpaka tsinkafona ity lehilahy ity, saingy nahavariana ny maro ny nahita azy hita faty toy izao. Nohamafisin’ny mponina hatrany fa ahina ho vonoan’olona tsotra izao ny ambadik’ity fahitana fatin’olona ity satria tsy azo eritreretina ny hisiana fanendahana tamin’ity lehilahy ity. Nitangorona vetivety ny olona nijery ilay niharam-boina. Nilaza ireo mponina fa sambany no nahitana fatin’olona toy izao tao amin’ity tsinkafona ity. Maro anefa ireo mpaka tsikafona eo amin’io toerana io, saingy nahavariana ny rehetra ny nahita ity fatin’olona ity.
Fotoana fohy taorian’izay, tonga nanao fizahana ny razana ny zandary.
Lehilahy iray manodidina ny 25 taona eo ho eo koa no hita faty teny amin’ny ranon’Ikopa eny Andohatapaneka omaly mitataovovonana. Voalazan’ny fianakaviana, nitsoraka tao anaty rano avy hatrany ity lehilahy ity ka tsy nipoitra intsony taorian’izay. Nilaza ny fianakaviany fa tsy dia salama saina loatra izy ka izao nitsoraka tampoka tany anaty rano izao. Tonga teny an-toerana nanao fikarohana ny razana ny mpamonjy voina. Hita ihany ny fatin’ilay niharam-boina, saingy efa tsy nisy aina intsony.
Matetika ahitana fatin’olona hatrany iny reniranon’Ikopa iny. Sady fivelomana ho an’ireo mpaka fasika sy mpitaona biriky ary mpanasa lamba nefa koa toerana iray famoizam-po ho an’ireo tsy mahazaka intsony ny herin’ny fitiavana iny toerana iny.